Resadresaka nomerika: Ny fitehirizana ny teny Kadazan antserasera sy ireo fiteny vazimba teratany hafa any Borneo · Global Voices teny Malagasy
Sokajiana ho fiteny tandindomin-doza any Sabah, Malezia ny teny Kadazan.
Voadika ny 21 Mey 2021 4:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, English, Ελληνικά, Português, Esperanto , 日本語, English
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Manomboka ny 14-20 aprily 2021 dia handray ny kaonty Twitter ifandimbiasana @AsiaLangsOnline i Jeannet Stephen, izay manadihady ny fomba fampiasana ny teknolojia hamelomana ireo fiteny Aziatika. Vakio bebe kokoa ato ny momba ny fanentanana.
Fony nanao ny fanadinana asa-karoka hahazoana diplaoma fianarana ambony i Jeannet Stephen, dia nahita ny fanovana kaody (ny fanao amin'ny fifandimbiasana eo amin'ny fiteny roa na maromaro na karazana fiteny amin'ny resadresaka) ao anatin'ny fianakaviana teratany Kadazan ao Malezia. Amin'ny maha-Kadazan ny tenany, dia hitany avy hatrany ny zavatra niainany manokana amin'ity “fiteny roa” ity, tamin'izany no nahafantarany ny teny Tangaa’ na ny fiteny Kadazan amorontsiraka, saingy tsy afaka nahay niteny izany izy, toy izany koa ny maro amin'ny olona teo an-toerana. Na dia nahasosotra azy aza ny tsy fahaizany miteny ny fiteniny, dia nanosika azy hanohy hianatra sy hanohana ireo vondrom-piarahamonin'ny fiteny hafa ao amin'ny fanjakana Sabah any Borneo, Malaysia ihany koa izany.
Miaraka amin'ireo namana mpanolo-tsaina sy mpanohana, nitarika ny fananganana Sampam-pikarohana ho an'ny Fiteny sy ny Mpahay Fiteny Sabah ao amin'ny Oniversite Malaysia Sabah ny fahavononana. Avy eo ny vondrona nanatevin-daharana ny Borneo Research Institute for Indigenous Studies (BorIIS), Ivon-toeram-Pikarohana Fianarana ny Vazimba teratany ao Borneo (BorIIS) amin'ny maha-foibem-piteny sy Haifiteny azy. Mikaroka paikady samihafa ny vondrona mba hamelomana ireo fiteny eo an-toerana. Vao tsy ela akory izay dia nanao webinar niaraka tamin'ny Wikimedia Indonezia sy ny Sampam-pandaminana ny teny Indoneziana amin'ny lohahevitra “Fampaharetana ireo Fiteny Indizeny amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo tetikasa Wikimedia”. Nandraisany anjara ihany koa ny nanabe voho fahalalana ho an'ny Tetikasa ho an'ireo Fiteny Tandindonin-doza momba ny Vaovao COVID-19 amin'ny Fiteny Indizeny, Tandindomin-doza sy zara raha hita (Endangered Languages Project’s COVID-19 Information on Indigenous, Endangered, and Under-Resourced Languages), tamin'ny fananganana afisy amin'ny fiteny Kadazandusun, Kadazan, Dusun, Rungus, Kimaragang, Tobilung, Murut, ary Bajau.
Jeannet Stephen (JS): Ivelan'ny aterineto, raha miditra ao amin'ny Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) ianao, dia heverina ho 6b – Voarahona ny Kadazan. Lazain'ny etnôlôgy fa ny habeny sy ny fahaveloman'i Kadazan amin'ny maha «Tandindomin-doza» azy amin'io loko mena io, dia midika fa tsy fanaon'ny ankizy intsony ny mianatra sy mampiasa an'io fiteny io.
Mediam-bahoaka 26 Jolay 2020